जव म मध्ये र सुदुर नेपाल पुगेँ...
गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली जय जय जय नेपाल सुन्दर शान्त नेपाल गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली लेक र बेंसी ब्युँझाउँछन् लहर लाख उचाली हिमालचुली बोलाउँछ पहिलो झुल्का निकाली सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले नेपाली सीताले सारा भिजाइन दक्षिण लंका भारत भृकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत बुद्धले यहीं पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान शिबले यहीं ल्याएथे सृष्टिको पहिलो
नागरिकको जीवनसँग पैसा साट्नेहरु, खबरदार !
नागरिकको चेतना स्तरोन्ती गर्ने अभियानमा सहभागी हुन पाएकोमा निकै खुसीको अनुभूती गरेको छु । लेभल बिनाको सामग्री प्रयोग गर्नु हुँदैन र त्यस्तो सामग्री उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सन्देश दिन पाउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो अभियानमा जो सुकै अनुबन्ध होस त्यो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि भएकाले सराहनीय पक्ष हो । यो पुन्य कार्यमा
‘सुपरस्टार धमाका’ मा गायिका सुनिता
काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलाल एक महिना लामो सांगीतिक यात्रा ‘सुपरस्टार धमाका’का लागि पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका जिल्लातर्फ लागेकी छन् । उपभोक्तालाई ‘लेवल’ प्रयोग नभएको सावुन प्रयोग नगर्न सचेत बनाउन ह्विल ओके, भिम साबुन, ह्विल सर्फ र सन्सिल्क सेम्पुले आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यक्रममा गायिका सुनिताले आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुती दिन लागेकी हुन् । “आफूले
सेलिब्रिटीले सडकमा हिँड्नै नहुने ?
काठमाडौं । करिब तीन चार वर्ष अगाडि हुनुपर्छ । ठ्याकै मिति याद भएन अहिले । गोधुली साँझ थियो । घाम भर्खरै पश्चिम चन्द्रागिरीबाट ओरोलो लागेको थियो । मध्य बानेश्वर, ह्वाइट हाउस कलेज अगाडि । सडक पेटीमा ठेलागाडामा साँझ तरकारी बेच्नेहरु निष्किसकेका थिए । तक्मे अर्थात विल्सन विक्रम राई त्यहाँ देखिए । उनी तरकारी किन्न थाले । माक्स समेत नलाएका उनलाई सडकपेटी भएर हिँड्नेहरुले नचिन्ने
Singer Sunita Dulal Involve in online busines too
काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलाल गीतसँगै अनलाइन ‘विजनेस’ मा पनि सक्रिय छिन् । सन् २०११ बाट ‘आई–सप’ सञ्चालनमा ल्याएकी उनी अनलाइन बाटै अर्डर लिँदै आएकी छन् । “२०११ बाट ‘आई–सप’ सुरु गरेकीँ हुँ,” सुनिता भन्छिन्, “अहिले भने अनलाइनमा आएको समस्याका कारण अनलाइनबाट अर्डर लिन सकेकी छैन ।” अहिले फेसबुक र भाइबरबाटै अर्डर लिने गरेको उनले बताइन् । “सिजनमा निकै धेरै
नेपाल आइडलका लागि तपाइँलाई सुभकामना !
कलाप्रेमीहरुको लामो प्रतिक्षा पछि सुरु भएको नेपाल आइडलमा सहभागीहरुलाई सुभकामना । छेवैको भारतमा थुप्रै इण्डियन आइलका श्रृखलाको सुखद अन्त्य भइसक्दा बल्ल यहाँ सुरु भयो । ढिलै भए पनि सुरु भएको नेपाल आइडलमा सहभागिता जनाउनु हुने हजारौं सहभागीहरुमा सफलताको सुभकामना ! विभिन्न समयमा विभिन्न तहबाट केही सानै स्तरमा भए पनि यस्ता प्रतियोगिता यस अघि पनि भए । त्यसबाट आफूलाई स्थापित